ကိုယ့်​ကိုကို ပြန်​ကယ်​​ပေးပါလို့ ရဲတိုက်​ကို ​တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ ပရိတ်​သတ်​​တစ်​ဦး - Cele Platform
သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော ရဲတိုက်ကတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီး သဘာဝကျကျ ပီပီပြင်ပြင်နဲ့ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်မူထူးခြားတဲ့ပုံစံနဲ့ မျက်လုံးအကြည့်တွေကအစ အသက်ဝင်အောင် သရုပ်ဖော်နိုင်တဲ့ ရဲတိုက်က မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ရဲတိုက်က သူရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကို ဆေးကြောသန့်စင်ပြီးပြီဖြစ်တာကြောင့် အနုပညာလောကကို ပြန်လည်အခြေချခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရဲတိုက်က ထောင်ကလွတ်မြောက်ပြီးပြီးချင်းမှာ ” ဒဏ္ဍာရီမိုး ” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို လက်ခံရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာလည်း ပရိသတ်တွေက ရဲတိုက်ရဲ့ထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကို မြင်တွေ့ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေထဲက တစ်ယောက်ကလည်း ရဲတိုက်အတွက် စိတ်ခွန်အားတွေဖြစ်စေမယ့် စာတစ်စောင်ကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ရဲတိုက်ရဲ့ပရိသတ်က အရက်၊ဆေးလိပ်နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကြောင့် ထောင်ထဲရောက်တဲ့ အထိဖြစ်သွားပြီး သရုပ်ဆောင်ဘဝ ဇာတ်သိမ်းပြီလို့ Hollywood တစ်ခုလုံးက နှမြောခဲ့ရတဲ့ ကမ္ဘာကျော်သရုပ်ဆောင် Robert Downey Jr. (Ironman ) ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြီး ရဲတိုက်အတွက် စာရေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူပြောပြထားတာကတော့ ” သို့…..ကိုရဲတိုက် ကျွန်တော် ခင်ဗျားရဲ့ ပရိသတ်ပါ ပဟေဠိနတ်သမီး က အစ ဆာတိုရီရဲ့ မင်းသားဖြစ်တဲ့ အထိ အခွေဌားဆိုင်မှာ ရဲတိုက် ကားလေးချန်ထားပေးပါလို့ ကျောင်းက အပြန် ကျူရှင်က အပြန် သွားသွားမှာနေတဲ့ ကျောပိုးအိတ်နဲ့ ချာတိတ် တစ်ကောင် ခင်ဗျား ဆိုးနေလဲ ခင်ဗျားက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရဲတိုက်ပဲ ခင်ဗျား ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ် မျှော်နေတဲ့ ပရိသတ် မမေ့သေးတဲ့ ပရိသတ်တွေတောင် ဒီအနုပညာလောကထဲမှာ နေရာရနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်ပြီ ခင်ဗျားသိလား? ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက် ခင်ဗျားကိုချစ်ချစ် ခင်ဗျားကိုယ် ခင်ဗျား မချစ်ရင် အလကားဘဲ အရင်လို ပြန်မလိုချင်ဘူးဗျာ ဆိုးခဲ့တဲ့ အရာတွေနဲ့ လောကကြီးအကြောင်း စာတတ်ပြီးသား ရဲတိုက် ကို မြင်ချင်တယ် ကျွန်တော်တို့ကို အားနာဗျာ ဆုတောင်းခဲ့တယ် ဆုတောင်းနေတုန်းပဲ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် ပြန်ကယ်ပေးပါ။
ခင်ဗျားရဲ့ပရိသတ် ” ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲတိုက်ကိုချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိစေဖို့ စာအပြည့်အစုံကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။Myanmarload
သရုပျဆောငျ မငျးသားခြော ရဲတိုကျကတော့ ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးကို စိတျရောကိုယျပါနှဈပွီး သဘာဝကကြ ပီပီပွငျပွငျနဲ့ အကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျတတျတဲ့ ပွညျသူခဈြ အနုပညာရှငျတဈဦး ဖွဈပါတယျ။ တဈမူထူးခွားတဲ့ပုံစံနဲ့ မကျြလုံးအကွညျ့တှကေအစ အသကျဝငျအောငျ သရုပျဖျောနိုငျတဲ့ ရဲတိုကျက မူးယဈဆေးဝါးမှုနဲ့ ပွဈဒဏျကခြံခဲ့ရသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ အခုခြိနျမှာတော့ ရဲတိုကျက သူရဲ့အပွဈတှအေားလုံးကို ဆေးကွောသနျ့စငျပွီးပွီဖွဈတာကွောငျ့ အနုပညာလောကကို ပွနျလညျအခွခေခြဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ရဲတိုကျက ထောငျကလှတျမွောကျပွီးပွီးခငျြးမှာ ” ဒဏ်ဍာရီမိုး ” ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကို လကျခံရိုကျကူးခဲ့တာဖွဈပွီး မကွာခငျမှာလညျး ပရိသတျတှကေ ရဲတိုကျရဲ့ထူးခွားပွောငျမွောကျတဲ့ သရုပျဆောငျမှုတှကေို မွငျတှရေ့တော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ကိုခဈြခငျအားပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှထေဲက တဈယောကျကလညျး ရဲတိုကျအတှကျ စိတျခှနျအားတှဖွေဈစမေယျ့ စာတဈစောငျကို ရေးသားခဲ့ပါတယျ။ ရဲတိုကျရဲ့ပရိသတျက အရကျ၊ဆေးလိပျနဲ့ မူးယဈဆေးဝါးတှကွေောငျ့ ထောငျထဲရောကျတဲ့ အထိဖွဈသှားပွီး သရုပျဆောငျဘဝ ဇာတျသိမျးပွီလို့ Hollywood တဈခုလုံးက နှမွောခဲ့ရတဲ့ ကမ်ဘာကြျောသရုပျဆောငျ Robert Downey Jr. (Ironman ) ရဲ့အကွောငျးကိုပွောပွပွီး ရဲတိုကျအတှကျ စာရေးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
သူပွောပွထားတာကတော့ ” သို့…..ကိုရဲတိုကျ ကြှနျတျော ခငျဗြားရဲ့ ပရိသတျပါ ပဟဠေိနတျသမီး က အစ ဆာတိုရီရဲ့ မငျးသားဖွဈတဲ့ အထိ အခှဌေားဆိုငျမှာ ရဲတိုကျ ကားလေးခနျြထားပေးပါလို့ ကြောငျးက အပွနျ ကြူရှငျက အပွနျ သှားသှားမှာနတေဲ့ ကြောပိုးအိတျနဲ့ ခြာတိတျ တဈကောငျ ခငျဗြား ဆိုးနလေဲ ခငျဗြားက ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ရဲတိုကျပဲ ခငျဗြား ကိုခဈြတဲ့ ပရိသတျ မြှျောနတေဲ့ ပရိသတျ မမသေ့ေးတဲ့ ပရိသတျတှတေောငျ ဒီအနုပညာလောကထဲမှာ နရောရနကွေတဲ့လူတှဖွေဈကုနျပွီ ခငျဗြားသိလား? ကြှနျတျောတို့ ဘယျလောကျ ခငျဗြားကိုခဈြခဈြ ခငျဗြားကိုယျ ခငျဗြား မခဈြရငျ အလကားဘဲ အရငျလို ပွနျမလိုခငျြဘူးဗြာ ဆိုးခဲ့တဲ့ အရာတှနေဲ့ လောကကွီးအကွောငျး စာတတျပွီးသား ရဲတိုကျ ကို မွငျခငျြတယျ ကြှနျတျောတို့ကို အားနာဗြာ ဆုတောငျးခဲ့တယျ ဆုတောငျးနတေုနျးပဲ ကိုယျ့ကိုယျ ကိုယျ ပွနျကယျပေးပါ။ ခငျဗြားရဲ့ပရိသတျ ” ဆိုပွီး ရေးသားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ရဲတိုကျကိုခဈြကွတဲ့ ပရိသတျတှလေညျး သိရှိစဖေို့ စာအပွညျ့အစုံကို အောကျမှာ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။Myanmarload